Madaxweynaha Galmudug oo daahfuray mashruuca Biyoole +(SAWIRRO) – HalQaran.com
Madaxweynaha Galmudug oo daahfuray mashruuca Biyoole +(SAWIRRO)
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug, Mudane Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa Sabtidii maanta daahfuray mashruuca biyoole oo ay soo diyaarisay Wasaaradda Qorshaynta, Horumarinta Dhaqaalaha iyo iskaashiga Caalamiga ah ee Galmudug kaasi oo lagu qabtay xarunta Madaxtooyada Galmudug.
Shirka oo ay ka soo qeyb galeen Wasaaradaha mashruucani uu quseeyo ayaa waxaa ugu horrayn ka hadlay Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta Galmudug mudane Cabdinaasir Geele Cilmi.
Wasiirka ayaa sharaxaad ka bixiyey Mashruucaan oo uu xusay in uu socan doono muddo shan sano ah, ayna ka faa’iidaysan doonaan dadka u badan beeralayda iyo xoola dhaqatada.
Sidoo kale, Wasiirka Wasaarada Tamarta iyo Khayraadka Biyaha Galmudug Maxamuud Cabdi Axmed (Kaarshe) ayaa tilmaamay in mashruucani yahay mid tijaabo ah, loona baahanyahay in laga Faa’iidaysto.
Madaxweynaha Galmudug, Axmed Qoorqoor oo mashruucaan si rasmi ah u daahfuray ayaa sheegay in uu yahay mid aad loogu baahnaa marka loo eego deegaannada Galmudug dhanka Biyaha.
Qoorqoor ayaa u mahadceliyey cid waliba oo kaalin ku leh mashruuca Biyoole.
Ugu dambeyn, Xoola dhaqatada iyo beeralayda deegaannada Galmudug ayaa ka faa’iidaysanaya mashruucan haddii uu noqdo mid mira dhala, waxaana Wasaaradda Qorshaynta iyo Horumarinta Dhaqaalaha Galmudug oo kaashanayso Wasaarado kale ay ku dadaalaysaa sidii howshaan loo horumarin lahaa.
Tags: daahfurin, Galmudug, Mashruuca biyoole, Qoorqoor, qorsheynta
Golaha Wasiirrada Puntland oo Ansixiyay Xeer cusub, kana dooday arrimo badan +(SAWIRO)
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir CCWarsame oo loogu soo dhaweeyay Garoowe